धेरै मान्छे मरम्मत बिना आफ्नो घर बदल्न चाहते हो, र महंगा सजावट मा धेरै पैसा खर्च नगर्नुहोस्। आधुनिक डिजाइनमा, अधिक र अधिक लोकप्रियता सजावट पर्खालहरु र फर्नीचर को साधारण र सुविधाजनक तरिका द्वारा अधिग्रहण गरिन्छ, आंतरिक स्टिकर को उपयोग गरेर।
यस्तो विचित्र डिजाइन कुनै पनि शैलीमा कोठाको लागि हाइलाइट हुन सक्छ। धेरै युरोपेली डिजाइनरहरूले यो सजावट प्रविधिको प्रयोग गरेर केही समयका लागि प्रयोग गर्दै आएका छन्, धेरै प्रयास र खर्च बिना अनौठो र असाधारण इन्टरियरहरू सिर्जना गर्छन्। यस लेखमा हामी यसको बारेमा थप विवरणमा छलफल गर्नेछौं।
आन्तरिक पर्खाल स्टिकर
यो आश्चर्यजनक छैन किनकि, पर्खालमा एक वा धेरै सानो तस्वीरहरूको धन्यवाद, तपाईं आन्तरिक रूपलाई आन्तरिक रूप दिन सक्नुहुन्छ र एक निश्चित वातावरण सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले, उदाहरणका लागि, कुनै पनि पर्खाल, लामो-बिल्ती पर्खाल, "प्ले" "फरक" हुन्छ यदि तिनीहरू एक जनावर, फूल, चरा, भित्ता, अमूर्त आदिको रूपमा सानो रेखाचित्रमा लागू हुन्छन्।
सजावटी आन्तरिक स्टिकर स्वयं-चिपकने वाला बहु-रंगीन vinyl फिलिमबाट बनेको छ, जुन कुनै पनि चिकनी सतहमा पूर्ण रूपमा लागू हुन्छ: वालपेपर, पेंट, काठ , प्लास्टिक, धातु, गिलास। सामान्यतया, यो तत्व सजावट घरको लगभग हरेक कुनाका पर्खालहरू सजावट गर्दछ: एक लिङ्ग कोठा, एक नर्सरी, एक शयन कक्ष र भान्सा र भान्सा पनि।
दीवारमा आन्तरिक vinyl स्टिकरहरूको मुख्य फाइदा अनुप्रयोगको सजिलो हो। उनीहरु ग्लुण गर्न धेरै सजिलो हुन्छन् र कुनै पनि समयमा, धेरै प्रयत्नहरू, तिनीहरू प्रतिस्थापित गर्न सकिन्छ। यदि तपाईँ वालपेपरमा एक तस्वीर टाँस्नु हुन्छ र अन्तमा फेरि पुन: , ध्यानपूर्वक यो हटाउनुहोस्, पछि, तपाईं आफ्नो पर्खालमा एक उज्ज्वल र स्वच्छ ठाउँ हुनेछ, जुन तपाईं एक नयाँ तस्बिरको साथ अझ राम्रो लुकाउनु हुन्छ। सबै विच्छेदनले अधिकतम आधा घण्टा लिन्छ। तथापि, याद राख्नुहोस्, यदि वालपेपर पेपर हो, त्यस्ता अपरेसनको परिणामको रूपमा तिनीहरूले पीडित हुन सक्छन्।
भित्री vinyl स्टिकरहरू - यो महँगी वालपेपरको उत्कृष्ट विकल्प हो। सामान्यतया, निर्माताले छविको लागि 5-7 वर्ष वारंटी प्रदान गर्दछ, जुन वर्षा, बर्फ वा गर्मीको डरलाग्दो छैन, त्यसैले तिनीहरू बाहिर बाहिर र बाहिर दुलही गर्न सकिन्छ। यस अवस्थामा, यदि तपाईले प्राय: सफाई र सफा एजेन्टहरूसँग लेबलको सतहलाई सँभाल्नुहुनेछ, यसले छविको गुणस्तरलाई असर गर्दैन।
आन्तरिक स्टिकरका प्रकारहरू:
स्टिकर - स्टेंसिल एक तस्वीरको लागि रिक्त ठाउँहरू, जुन पर्खालमा लागू हुन्छ, यसलाई चित्रण गर्नु अघि। त्यस पछि, यो हटाइयो, र परिणाम एक छवि हो;
एक अलग स्टिकर, जुन तुरुन्तै सतहमा हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ। सजावट पर्खालहरूको यो विधि सरल र तेर्सो हो, किनकि यो गजल तयार गरिएको तस्वीर को लागी धेरै उपयुक्त छ।
सतहमा, छविहरू एक मनपर्दो अनुक्रममा वा निर्दिष्ट अनुक्रममा राख्न सकिन्छ। तपाईं संरचनाको रूपमा अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ, र धेरै व्यक्तिगत लेबलहरू, र त्यसपछि स्वतन्त्र रूपमा तिनीहरूलाई मिलाउन सक्नुहुन्छ।
तपाईले देख्न सक्नु हुन्छ, गृह स्टिकर तपाइँको घर बिना धेरै प्रयासहरू र उच्च लागतहरू सजावटको लागि नयाँ र सरल तरिका हो, यो सबै असामान्य विचारहरू लागू गर्न सरल र रोचक छ। त्यसैले, उदाहरणका लागि, तपाईंको लिङ्ग कोठामा तपाईं उष्णकटिबंधीय तितलियों को बगाल भंग गर्न सक्नुहुन्छ वा सुन्दर तेंदुआमा राख्न सक्नुहुन्छ, र तपाईंको बेडरूमलाई अद्भुत दाईहरू वा भोकमरी डन्डेलिन्सहरू संग सजावट गर्नुहोस्। यदि तपाईं संगीत प्रेमी हुनुहुन्छ भने, उपकरणको साथ तपाइँको कुनाले vinyl रेकर्ड वा टिप्पणीहरूको छवि सजाउन सक्छ। बालबालिकाको आन्तरिक स्टिकर प्रयोग गरेर, तपाईं आफ्नो बच्चाको कोठालाई असाध्यै सुन्दर देशमा बदल्न सक्षम हुनुहुन्छ, त्यहाँ धेरै किराफुराहरू, चराहरू वा तपाईंको मनपर्ने कार्टून बच्चाको टुक्राको पर्खालमा बस्न सक्नुहुन्छ, त्यसपछि तपाईंको कल्पना असीमित हुन सक्छ।
भित्री ईंटहरू बनाइयो
भान्सा काम क्षेत्रको लागि एलईडी ब्याकलाइट
Baroque फर्नीचर - उत्तम आंतरिक
नर्सरीमा पछाडी छट्पटी
बेडरूमको लागि रंगहरू
आर्ट डेको चन्दलीहरू
पत्थर अन्तर्गत पानाको मुनि
एक बाबाको बेड कसरी गर्ने?
बैठक कोठामा स्लाइड गर्नुहोस्
बनाइएको सजावटी प्लास्टर
सुन्दर साँझ मेकअप मेकअप
नवजातको लागि बेनोकिन
मल्टीवाईटमा मटर सूप
ग्रीनहाउसमा मिट्टी को कूटनीतिक कसरि गर्ने?
प्लास्टिक खिडकियां मा रोलर अंधा
केरी "मोनिकस्टिक हट" चेरी संग
हनी एरिक्सनका लागि के उपयोगी छ?
केवल कुकुरहरूसँग हुन सक्छ 27 मजेदार दुर्घटनाहरू
संसारमा सबैभन्दा प्रभावकारी आहार
मोजा टारारिनोले विवाहित र चौथो बच्चाको पर्खाइरहेको छ!
Greer Childers संग Bodyflex
बीउबाट डल्फिनियम कसरी विकास गर्ने?
कसरी बीफ पसल पकाउने?
बच्चाले बन्द गर्ने बेलामा सुरु हुन्छ?
नवजातको लागि पालना
एक दिनको रूपमा सात वर्ष: टुटन परिवारले विवाहको सालगिरह मनाउँछिन्
मल्टीवार्क मा स्टूड खरगोश
आहार बढेको यूरिक एसिडको साथ
प्रेमलाई आकर्षित गर्न मनन
पीच तेल - आवेदन